12 Zvino Jehovha akati kuna Abramu: “Buda munyika yako ubve kuhama dzako nomuimba yababa vako, uende kunyika yandichakuratidza;+ 2 ndichaita rudzi rukuru runobva mauri, ndichakukomborera, ndichaita kuti zita rako rive guru; uye uchava chikomborero.+ 3 Ndichakomborera vaya vanokukomborera, ndichatuka anokutuka,+ uye mhuri dzose dzepanyika dzichazvikomborera nokwauri.”+ 4 Abramu akaenda sezvaakanga ataurirwa naJehovha, uye Roti akaenda naye. Zvino Abramu akanga ava nemakore makumi manomwe nemashanu paakabuda muHarani.+ 5 Naizvozvo Abramu akatora Sarai mudzimai wake+ naRoti mwana womukoma wake+ nezvinhu zvose zvavakanga vaunganidza+ nemweya yavakanga vawana muHarani, vakabuda kuti vaende kunyika yeKenani.+ Vakazosvika kunyika yeKenani. 6 Zvino Abramu akapfuura nomunyika yacho kusvikira kunzvimbo yeShekemu,+ pedyo nemiti mikuru yeMore;+ uye panguva iyoyo muKenani aiva munyika yacho. 7 Zvino Jehovha akazviratidza kuna Abramu akati: “Ndichapa mwana* wako+ nyika iyi.”+ Pashure paizvozvo akavakira Jehovha atari ipapo, uyo akanga azviratidza kwaari. 8 Gare gare akabva ipapo akaenda kunzvimbo ine makomo kumabvazuva kweBheteri,+ akadzika tende rake, Bheteri riri kumavirira uye Ai+ riri kumabvazuva. Akabva avakira Jehovha atari ipapo,+ akatanga kudana zita raJehovha.+ 9 Pashure Abramu akaputsa musasa, akabva aramba achingotamisa-tamisa musasa akananga kuNegebhu.+ 10 Zvino nzara yakavapo panyika yacho, Abramu akaenda kuIjipiti kuti anogara ikoko ari mutorwa,+ nokuti nzara yakanga iri huru panyika yacho.+ 11 Paakanga ava pedyo nokupinda muIjipiti, akabva ati kuna Sarai mudzimai wake: “Ndapota, zvino! Ndinoziva kuti uri mukadzi ane chitarisiko chakanaka.+ 12 Naizvozvo zvichaitika chete kuti vaIjipiti vachakuona uye vachati, ‘Uyu ndiye mudzimai wake.’ Chokwadi vachandiuraya, asi iwe vachakuchengetedza uri mupenyu. 13 Ndapota iti uri hanzvadzi yangu,+ kuti ndiitirwe zvakanaka nokuda kwako, uye chokwadi mweya wangu uchararama nokuda kwako.”+ 14 Naizvozvo Abramu achangopinda muIjipiti, vaIjipiti vakaona mukadzi wacho, kuti akanga akanaka kwazvo. 15 Machinda aFarao akamuonawo akatanga kumurumbidza kuna Farao, zvokuti mukadzi wacho akaendeswa kumba kwaFarao. 16 Iye akaitira Abramu zvakanaka nokuda kwake, uye akava nemakwai nemombe nembongoro nevashandirume nevashandikadzi nembongoro hadzi nengamera.+ 17 Jehovha akabva atambudza Farao neimba yake nematambudziko makuru+ nokuda kwaSarai, mudzimai waAbramu.+ 18 Naizvozvo Farao akashevedza Abramu akati: “Chii ichi chawandiitira? Nei usina kundiudza kuti mudzimai wako?+ 19 Nei wakati, ‘Ihanzvadzi yangu,’+ zvokuti ndange ndava kutoda kumutora kuti ave mudzimai wangu? Zvino hoyu mudzimai wako. Mutore uende!” 20 Farao akarayira varume nezvake, vakamuperekedza nomudzimai wake nezvose zvaakanga anazvo.+
^ Ge 12:7 Kureva, “mbeu.”